စာဖတ်သူဟာ မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲကနေ ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့စိတ်ကူးနေပါသလား?
နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဝင်ငွေကို အကျိုးရှိရှိဘယ်လို သုံးရမလဲဆိုတာ နားလည်တဲ့သေူတွနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲ တွေကနေပြီးတော့ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလေ့ရှိကြတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတွေ သိကြမှာပါ။ ကားဝယ်မယ်၊ အထူးသဖြင့် တစ်ပတ်ရစ်ကားဝယ်မယ်ဆိုရင် ကားလေလံပွဲတွေကနေဝယ်ယူတာဟာ ပညာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှု၊ ပညာရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ?
ကားတစ်စီးဝယ်ယူစီးနင်းရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဆိုရင်တော့ တစ်စီးဆို တစ်စီး တစ်သက်လုံးစီးတာမျိုး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ကားကို သက်တမ်းတစ်ခုအထိပဲ ဝယ်ယူစီးနင်းကြတာပါ။ ဒီလို သက်တမ်းတစ်ခုအပြီး လဲလှယ်ရမယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွက် အချို့သူတွေကတော့ ထိုက်သင့်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏလောက်ကိုပဲ အသုံးပြုချင်ကြတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲ ဆိုတာ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်တဲ့နေရာပါပဲ။
နောက်တစ်ချက်က မော်တော်ယာဉ် လေလံတင်ကြသူတွေအတွက်ပါ။ ကားတစ်စီးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောင်းထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲ ထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာ မရှိတော့ပါဘူး။
အမေရိက အပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများစွာမှာ မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲဆိုတာ မြို့တိုင်း၊ မြို့တိုင်းမှာ ပုံမှန် ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ပွဲမျိုးပါ။ ပွဲတိုင်းမှာလည်း ကားရောင်းသူ၊ ကားဝယ်သူတွေ တန်းစီနေတာချည့်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ငွေကြေးကို ထိထိရောက်ရောက် ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲ၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို သိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အလျောက် ကားလေလံပွဲတွေကလည်း အမြဲတမ်းစည်းကားလို့နေပါတယ်။
မော်တော်ယာဉ် လေလံပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အားသာချက်တွေ များစွာရှိသလို၊ အားနည်းချက်အချို့လည်း ရှိတယ်ဆိုတာတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲ?
၁။ ကားလေလံပွဲတွေက ကားတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေဟာ အမျိုးအစားတူဆိုရင် အချိန်တိုင်း အခြေားရာင်းချတဲ့ဘယ်လိုကားတွေထက်မဆို လွန်စွာသက်သာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငွေအကြောင်းသိနားလည်တဲ့သူတွေ ကျိတ်ကျိတ်တိုးနေကြတာပေါ့။
၂။ လေလံပွဲက ဝယ်ယူတဲ့ကားတွေဟာ ပိုပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာ လေလံတင်မယ့်ကားတွေကို အထူးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်လို့ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင် ဟိုဟာတွေစုံစမ်း၊ ဒီဟာတွေစုံစမ်း ခေါင်းရော လူရော အလုပ်ရှုပ်မယ့်အစား လေလံပွဲမှာပဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကားအမျိုးအစားကို သွားရှာကြည့်သင့်တယ်။
၃။ ကားအမျိုးအစားကောင်းတွေနဲ့ models တွေကို တကယ့်ကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဈေးနဲ့ ရလေ့ရှိတယ်။ ကားလေလံပွဲဟာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် အနုပညာလက်ရာ လေလံပွဲတွေနဲ့မတူပါဘူး။ ဝယ်သူတွေရဲ့ ငွေသုံးပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘဲ ရောင်းသူတွေရဲ့ ရောင်းကုန်အရည်အသွေးပြိုင်ပွဲပါ။
၁။ ကားတွေဟာ ဈေးပေါတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေချည့်ပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော တစ်ပတ်ရစ်က တစ်ပတ်ရစ်ပါပဲ။
၂။ နိုင်ငံတကာမှာ အချို့သော ကားလေလံပွဲစီစဉ်သူတွေဟာ လေလံလာတင်မယ့် ကားတွေကို စစ်ဆေးရာမှာ ပေါ့ပျက်ပျက်လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကတော့ မော်တော်ယာဉ်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြီးမှူးကျင်းပသူကောင်းကောင်း ကိုရှာဖွေမှတ်သားထားရမှာပါ။
၃။ နိုင်ငံတကာရဲ့ အချို့သော ကားလေလံပွဲတွေမှာ ကားအာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှလုပ်ပေးထားလေ့မရှိကြဘူး။ ဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့ ကားအာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထည့်သွင်းကျင်းပနိုင်တဲ့ ကြီးမှူးကျင်းပနိုင်သူတွေ ပြုလုပ်တဲ့ပွဲတွေကိုပဲ သွားသင့်ပါတယ်။
မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတိုချုပ်ဆိုရရင်တော့ ကားလေလံပွဲတွေမှာ ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ကိုယ့်အတွက် စစ်ဆေးပြီး စိတ်ချရတဲ့ ကားတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကြီးမှူးကျင်းပသူ ကိုတော့ ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုကားအမျိုးအစားက သင့်လျော်မလဲ၊ ကိုယ်ဝယ်ချင်တာ ဘယ်လိုကားအမျိုးအစားဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့မော်တော်ယာဉ်လေလံပွဲ ကိုမသွားခင် ကြိုတင်စဉ်းစား တိုင်ပင်လာကြဖို့ပါပဲ။
Ref: Car Auction: Pros And Cons Of Purchasing An Auto At Auctions by Alex Baumm